The Voice ဂျာနယ်. 7-6 ~ ဒီမိုဝေယံ
The Voice 7-6
မသင်္ကာသူ လေးဦးအား စစ်ဆေးရာမှ ဆိုင်ကယ် လေးစီးခိုးမှု ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့
ဗဟုသုတ မှတ်သားစရာ မြန်မာစကားပုံများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်)
ဗဟုသုတ မှတ်သားစရာ မြန်မာစကားပုံများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်) 1. Adjust burden to strength, like arrow to bow. တန်နှင့်အားကို လေးနှင့်မြှာ...
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးနေ့မှာ သစ်ပင် စိုက်ဖို့မေ့နေသော မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန. . .
မြန်မာ့ရေမြေ သဘာဝတောတောင်များကို အဓိက ပျက်စီးစေသောလုပ်ငန်းကြီးများမှာ . . . ၁ ။ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း ၂ ။ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း ၃ ။ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်...